नेपाल र बंगलादेश सरकारबीच दोहोरो करमुक्तिसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपालका तर्फबाट राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरे र बंगलादेशका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ सचिव मोसहरफ हुसैन भुईयानले मंगलबार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौतापत्रको हस्ताक्षर कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र बंगलादेशकी राजदूत मसेफ बिन्टे सामसमेत उपस्थित थिए ।
सम्झौतापछि रोजगारी तथा व्यापारका लागि एक देशको नागरिकले अर्को देशमा बसेर आर्जन गरेको सम्पत्ति सोही देशमा मात्रै कर तिर्दा हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार एउटा देशमा मात्रै कर तिर्ने व्यवस्था गरे लगानीकर्तालाई उचित वातावरण हुने भएपछि दुवै मुलुकले दोहोरो कर तिर्न नपर्ने गरी सम्झौता गरेका हुन् । “यसबाट दुवै मुलुकलाई फाइदा पुग्छ,” राजस्व सचिव घिमिरले भने, “दुवै मुलुकबाट लगानीका लागि वातावरण बनाउन पनि सो सम्झौताले सघाउ पु-याउने छ ।”
पछिल्लो समय बंगलादेशबाट पनि नेपालमा लगानी गर्न चाहने कम्पनीहरू भित्रिएका छन् । लगानीका लागि आउने यस्ता कम्पनीलाई सो सम्झौताले आत्मबल बढाउने सरकारको अपेक्षा छ । बंगलादेशसँग दोहोरो कर उन्मुक्तिसम्बन्धी सम्झौता गर्ने तयारी सरकारले २०७१ सालमै गरेको थियो ।
नेपालले यसअघि नै चीन, भारत, कतार, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, मरिसस, अष्ट्रिया, श्रीलंका, नर्वे र थाइल्याण्डसँग यस्तो सम्झौता गरिसकेको छ । बंगलादेश ११औं दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरिएको राष्ट्र भएको छ । साथै जापान, अमेरिका, सिंगापुरलगायतका मुलुकसँग पनि सो सम्बन्धी दुई पक्षीय सम्झौता गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न आयोजिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग बंगलादेशका वरिष्ठ सचिव मोसहरफ हुसैन भुईयान र नेपालस्थित बंगलादेशकी राजदूत मसेफ बिन्टे सामले भेटवार्तासमेत गरेका थिए ।
कृषि प्राथमिकतामा, लगानी सम्मेलन गरिने
बजेटमा तलव बढाउन माग
अदुवा अनुदानमा अनियमितता
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गण्डकीको योगदान ३ खर्ब